“🔒” အဓိပ္ပါယ်: ပိတ်နေသော သော့ခလောက် Emoji | EmojiAll
“🔒” အဓိပ္ပါယ်: ပိတ်နေသော သော့ခလောက် Emoji
မူလနေရာ » အရာဝတ္ထု » သော့ခတ်
🙂စိတ်ဓါတ်များ Analytics မှ
ဒါကရွှေပိတ်ထားတဲ့သော့ခလောက်ပါ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်စစ်မှန်သောဘဝ၌သော့ခတ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည်အင်တာနက်သတင်းအချက်အလက်စက်မှုလုပ်ငန်းရှိအများဆိုင်သော့သို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်သော့ခတ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည်လုံခြုံသောဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်စာဝှက်ထားသောဖိုင်များကိုလည်းကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။ ဒါဟာတခါတရံ🔐နှင့်အတူရောနှောထားနိုင်ပါတယ်။
အီမိုဂျီသင်္ကေတ 🔒 သည် ပိတ်နေသော သော့ခလောက် ဖြစ်သည်က ပိတ်ထား နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်၎င်းကို Emoji အမျိုးအစားတွင်တွေ့နိုင်သည်။ "⌚ အရာဝတ္ထု" - "🔏 သော့ခတ်".
လက်ရှိ 🔒 သည်အခြေခံသင်္ကေတများမပါသောအခြေခံ Emoji ဖြစ်ပြီး၊ Emoji မူကွဲနှစ်ခုဆက်နွယ်နေသည်။ ၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော: 🔒️ (emoji စတိုင်၊ ပလက်ဖောင်းအသစ်များတွင်ရောင်စုံသင်္ကေတများကိုပြသခြင်း) နှင့် 🔒︎ (စာသားစတိုင်၊ အနက်နှင့်အဖြူသင်္ကေတများပေါ်တွင်ပြသသည်) အချို့အဟောင်းပလက်ဖောင်း) ။
🔸bste it from your your your your your your your your your your ste your ste ste your ste
🔸 ဟေ့ဂျယ်ရီ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်၏ ကွန်ပျူတာမှသော့ခတ်ထားခံရသည်။ 🔒
🔸 🔒 (1F512) + အီမိုဂျီစတိုင် (FE0F) = 🔒️ (1F512 FE0F)
🔸 🔒 (1F512) + စာသားပုံစံ (FE0E) = 🔒︎ (1F512 FE0E)
စိတ်ဓါတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ | emojiall.com အပြုသဘော: 74.32% ကြားနေ: 8.28% အပျက်သဘော: 17.4% 17.4% 8.28% 74.32% Score: 0.569±0.0310 ❤️
Emoji ခံစားချက်ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုသည်မှာ emoji ၏စိတ်ခံစားမှုဖော်ပြချက်ကိုခွဲခြားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ဘာသာစကားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်အများသုံးနမူနာများကိုတွစ်တာသန်း ၅၀ ထက်မနည်းသောစက်သင်ယူမှုမှဖြစ်ပြီးတိကျသောရလဒ်ဖြစ်ပြီးမြင့်မားသောပညာရေးရည်ညွှန်းချက်ဖြစ်သည်။ ဆွေးနွေးရန်, ရည်ညွှန်း, ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းနှင့်မျှဝေဖို့ကြိုဆိုပါသည်။ မူပိုင်ခွင့်© EmojiAll ။ စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ
ဘယ်လို emoji အပေါ်စိတ်ဓါတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်ဆောင်သလဲ? ကျွန်ုပ်တို့၏ blog post ကိုဒီမှာကြည့်နိုင်သည် Emoji Sentiment Analysis
လိမ္မော်ရောင် - အနုတ်လက္ခဏာ
မီးခိုးရောင် cursor: ကယုံကြည်မှုအဆင့်၊ စာရင်းအင်းသဘောတရားပါ။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် cursor သည်ဘယ်ဘက်သို့ရွေ့သည်။ emoji ၏စိတ်ခံစားမှုသည် ပို၍ ဆိုးသည်။ ဆန့်ကျင်တွင်, ပိုမိုနီးကပ်စွာ cursor ကိုညာဘက်ဖြစ်ပါသည်, ဒီရုပ်ပြောင်အားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှု။ ပြီးတော့ cursor ကကျဉ်းတယ်၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကပိုပြီးတိကျတယ်။
ပိုပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှင်းပြချက်ကိုကြည့်ပါ: Wikipedia ။
ရာထူးနှင့်ကြိမ်နှုန်း | emojiall.com 100 75 50 250ဝါကျခေါင်း ဝါကျအဆုံးသတ် 7.16%3.25%6.53%24.67%10.75%5.42%5.72%7.89%6.49%22.12%
Position and Frequency သည် Emoji များကိုတွစ်တာများတွင်မကြာခဏတွေ့ရသည့်နေရာနှင့်ဤရာထူးများတွင်မည်မျှတွေ့ရသည်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ location ၏ [တည်နေရာနှင့်ကြိမ်နှုန်း] ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအားဖြင့်လူတိုင်းသည် ၀ ါကျအဆုံးတွင် emoji put ကိုထည့်ရန်ကြိုက်ကြောင်းသိနိုင်သည်။ ဤကောက်ချက်သည်အများသုံးနမူနာများကိုတွစ်တာသန်း ၅၀ ထက်နည်းသောဗဟုသုတများကိုလေ့လာခြင်းနှင့်စက်လေ့လာခြင်းမှဖြစ်ပြီးတိကျသောရလဒ်ဖြစ်ပြီးမြင့်မားသောပညာရေးရည်ညွှန်းချက်ဖြစ်သည်။ ဆွေးနွေးရန်, ရည်ညွှန်း, ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းနှင့်မျှဝေဖို့ကြိုဆိုပါသည်။ မူပိုင်ခွင့်© EmojiAll ။ စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုရန် ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ရန်
X ဝင်ရိုး: tweets စာသားထဲမှာဒီအထူးသဖြင့်ရုပ်ပြောင်များ၏အနေအထား။
Y ကဝင်ရိုး: ဒီအထူးသဖြင့်ရုပ်ပြောင်များ၏ပေါ်ထွန်းကြိမ်နှုန်း။
နေ့စဉ် (ဘာသာစကားအားလုံး) 314 3
အပတ်စဉ် (ဘာသာစကားအားလုံး) 324 9
လစဉ် (ဘာသာစကားအားလုံး) 315 41
နှစ်စဉ် (ဘာသာစကားအားလုံး) 313 72
🇮🇷 အီရန် 125 --
🔒 (1F512) အချိန်ကျော်လူကြိုက်များအဆင့်သတ်မှတ်ချက် | emojiall.com 100 75 50 2502017 2018 2019 2020 2021
ရက်စွဲအပိုင်းအခြား: 2016-10-16 - 2021-10-03
အချိန်အသစ်ပြောင်းပါ: 2021-10-12 17:56:38 UTC
🔒 ဆက်ဆံရေးဇယား | emojiall.com0ပိတ်နေသော သော့ခလောက်🔒 1 လက်ပတ်နာရီ⌚2မင်တံနှင့် သော့ခလောက်🔏3ပိတ်ထားသည့် စာအုပ်📕4ပိတ်ထားသည့် သော့ခလောက်နှင့် သော့🔐5သော့🔑6ချိတ်🔗7မူလီနှင့် မူလီခေါင်း🔩 8 ပွင့်နေသော သော့ခလောက်🔓9ဒိုင်း🛡 10 ကတ်ကြေး✂ 11 တံခါး🚪 12 ကီးဘုတ်⌨ 13 ပစ္စည်းအပ်ရန်🛅 14 ခြေကျင် လျှောက်သူ🚶 15 ကုလားထိုင်🪑 16 အိမ်🏠 17 စားပွဲတင် ကွန်ပျူတာ🖥 18 ပဲ့ထိန်းမဏ္ဍိုင်🕹 19 ချည်ခင်🧶 20 ဆံပင်ညှပ်ဆိုင် တိုင်💈 21 အမျိုးသား- မုတ်ဆိတ်ရှိသူ🧔
🔒 တိမ်တိုက် | emojiall.com 14 ဂီယာ 14 ဂီယာဂီယာ 13 တံခါး 13 တံခါးတံခါး 12 ချိန်းကြိုး 12 ချိန်းကြိုးချိန်... 11 ဒိုင်း 11 ဒိုင်းဒိုင... 10 ပွင့်နေသော သော့ခလောက် 10 ပွင့်နေသော သော့ခလောက်ပွင့်...9မူလီနှင့် မူလီခေါင်း9မူလီနှင့် မူလီခေါင်းမူလီနှ... 8 မင်တံနှင့် သော့ခလောက် 8 မင်တံနှင့် သော့ခလောက်မင်တံန...7ချိတ်7ချိတ်ချိတ်6သော့6သော့သော့5ပိတ်ထားသည့် သော့ခလောက်နှင့် သော့5ပိတ်ထားသည့် သော့ခလောက်နှင့် သော့ပိတ်ထား...4ပိတ်ထားသည့် စာအုပ်4ပိတ်ထားသည့် စာအုပ်ပိတ်ထာ...3သော့ခတ်3သော့ခတ်သော့ခတ်2အရာဝတ္ထု2အရာဝတ္ထုအရာဝတ္ထု 1 ပိတ်ထား 1 ပိတ်ထားပိတ်ထား0ပိတ်နေသော သော့ခလောက်0ပိတ်နေသော သော့ခလောက်ပိတ်နေသော ...
နာမည်အတိုကောက်: ပိတ်နေသော သော့ခလောက်
Apple နာမည်: Closed Lock
Codepoint: U+1F512 ကူးပါ
စာတိုကုဒ်: :lock: ကူးပါ
အမျိုးအစားများ: ⌚ အရာဝတ္ထု
အမျိုးအစားခွဲများ: 🔏 သော့ခတ်
သော့ချက်စာလုံးများ: ပိတ်ထား | ပိတ်နေသော သော့ခလောက်
🔐ပိတ်ထားသည့် သော့ခလောက်နှင့် သော့
Emoji 🔒 ဘယ်လိုမွေးဖွားတယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်။ သင်လိုချင်သော Emoji ကိုဖန်တီးရန်အဆိုပြုလွှာကိုမည်သို့တင်သွင်းရမည်နည်း။
ဘော့စျနီးယား 🔒 katanac
အင်ဒိုနီးရှား 🔒 gembok
ဒိန်းမတ်ဘာသာစကား 🔒 lukket hængelås
လက်ဘီအံ 🔒 slēdzene
ချက် 🔒 zamknutý zámek
ပါးရှား 🔒 قفل
ပေါ်တူဂီ၊ နိုင်ငံတကာ 🔒 cadeado
ေဟၿဗဲဘာသာစကား 🔒 מנעול
ဆားဗီးယား 🔒 катанац
ဘူလ်ဂေးရီးယား 🔒 катинар
💬မှတ်ချက် :0လက်ရှိ ဘာသာစကား
🤍အဖြူရောင် နှလုံးသား 💙အပြာရောင် နှလုံး 💛အဝါရောင် နှလုံး 🖤အနက်ရောင်နှလုံးသား 🧡လိမ္မော်ရောင် အသည်းနှလုံး
ပြုပြင်မွမ်းမံ: 2021-10-18 00:23:56 UTC
🍂 ဆောင်း ဦး ရာသီ
OS IOS 13 မှာမင်းနဲ့တူတဲ့ Memoji တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
🤳IOS တွင် imAnimoji Your သင်၏ Emojis များကိုရွှေ့ပါ။
Poop အတွက်အရူးအမူး ငါ Happy Poo Face Emoji ကိုဆိုလိုတာ